ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ (July’ 2014)…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ (July’ 2014)…။
ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ (July’ 2014)…။
Posted by စာ ၾကမ္းပိုး on Aug 5, 2014 in Creative Writing, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 57 comments
ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ တကယ်ကို ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ။
ဂျူလိုင်လ ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ က အဆိုးတွေလည်း ပါသလို အကောင်းတွေလည်း ပါတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
စာဂျပိုးတို့ကတော့ အဆိုးကိုလည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရသလို၊ အကောင်းကိုလည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်တာပါပဲ။
ဝါရင့်ရွာသားဟောင်းကြီး ကိုပေါက် (မန္တလေး) က သူ့ အတ္ထုပတ္တိ ကို ပို့စ်တွေ ရေးတင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတ္ထုပတ္တိ ရေးသော ပထမဆုံး ရွာသား အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
နောက် ကဗျာဆရာ ကမ်းဝေးတစ်ယောက် စကားပြေ ဘက် ဦးလှည့်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာအရေးကောင်းလှပြီထင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ငုတ်တုတ်မေ့သွားစေခဲ့သော ဂျိုးနှင့် ဝက်ခြံ၊
ဂျိုးနှင့် နှပ်ချေး ဝတ္တုတို ၂ ပုဒ် ရေးပြီး လမ်းသစ်ဖေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းဝေး ၏ ဂျိုးစီးရီး ပို့စ်လေးတွေက အသိအမှတ်မပြုပဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ပြေပြစ်ချောမွေ့လွန်းလှပါတယ်။
နောက် ကိုရွှေညာသား ဆိုသူ ရွာသားဟောင်းကြီး တစ်ဦးက ညီလေးအလင်းဆက် နှင့် မြန်မာစာချစ်သူ ရွာသူားများသို့
ဆိုပြီး အခန်းဆက်ပို့စ်တွေ တင်လာခဲ့တာပါပဲ။
အဲဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှား ရပါတယ်။
နောက် ရွာထဲ ပို့စ်မတင်တာ ကြာပြီ ဖြစ်သော မန္တလေးသူ pooch တစ်ယောက် မောင့်ဗစ်တိုးရီးယား ဆိုတဲ့
တောင်တက်မှတ်တမ်း ပို့စ် တစ်ပုဒ်တင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Pooch ပို့စ် တင်လာခြင်းနဲ့ အတူ ပျောက်နေခဲ့တဲ့ ကိုသစ်မင်းကလည်း ကွန်းမန့်လေး ဝင်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြင့်
ဒီ့ထက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာ ရှိဦးမလားလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
နောက် မန္တလေးသူ ပဲ ဖြစ်တဲ့ ခိုင်ဇာ က ရန်ကုန်သား ကိုဆာမိ နဲ့ ပူးပေါင်းလို့
ဇီဇီ ဆာဆာ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ တင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွာသူား တစ်ယောက်ခြင်းကို လေးလေးစားစား အသိအမှတ်ပြု ပေးထားကြတာဟာဖြင့်
အရေးခံရသူ ရွာသူားတွေအတွက် တကယ့်ကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှား ခဲ့ကြရပါကြောင်းနှင့်
Creative Thinking အပြည့်ပါသော ပို့စ်တင်သူတွေအဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ စာဂျပိုး အဖွဲ့သားများက အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း…။
August လ တွင် ကောင်းသော ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကိစ္စများ ဆက် ဖြစ်လာဦးမည်ဟု
စာဂျပိုးများမှ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဂျိုးနှင့် ဝက်ခြံ – marblecommet
ဂျိုးနှင့် နှပ်ချေး – marblecommet
ကဗျာဆရာ ကမ်းဝေး ၏ မှော်ဝင်လက်ရာ ပို့စ် လေးတွေလို့ ကျွန်တော်တို့ အမွှန်းတင်မိကြပါသည်။
ကဗျာအရေးကောင်းသော ကမ်းဝေးက ချစ်သူ ဂျိုးကို ပင်တိုင်ထား ရေးမည့် ဂျိုးစီးရီး ထဲမှ ဝတ္ထု လေး ၂ ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကဗျာရေးလက်ထက် ဝတ္ထု ရေးလက်ကို ပိုအကြိုက်တွေ့နေမိကြပါသည်။
ဂျိုး နှင့် ဝက်ခြံ ဝတ္ထုတွင် ဂျိုး ၏ ဝက်ခြံမုန်းပုံကို တစ်ပုဒ်လုံးရေးဖွဲ့လာခဲ့ပြီး
ချစ်သော ဂျိုးသည် ဤသို့ ဝက်ခြံများကို မုန်းလွန်းပါသောကြောင့် ကျွန်တော်က ပိုချစ်ရပါသည်
ဟု ပို့စ်ကို အဆုံးသတ်ပေးထားခဲ့ပါသည်။
ဂျိုး၏ လက်မထိပ်တွင် တောင်ပျံဆန်လုံးဝက်ခန့် ညိုညစ်ညစ် ဝက်ခြံညှောင့်ကြီးသည် လှပစွာ စံစားနေလေသည်။
ဆိုသည့် အတွေးအရေးကို ကျွန်တော်တို့ အကြိုက်တွေ့နေမိကြပါသည်။
ဂျိုး နှင့် နှပ်ချေး ဝတ္ထုတွင်လည်း
ကျွန်တော်၏ ဘယ်လက်မောင်းမှာ ညိုညစ်ညစ်၊ စေးကပ်ကပ်နှင့် ဂျိုး၏ နှပ်ချေးဖတ်သည် အောင်မြင်စွာ စံစားနေလေသည်
ဆက်စုပ်ရွံရှာစရာ နှပ်ချေးကိုပင် ကြီးမားအိတွဲနေသော နှပ်ချေးဖတ်ကြီး တစ်ဖတ် ဆိုပြီး ဖွဲ့နွဲ့ထားပြန်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကမ်းဝေး ၏ ဂျိုးစီးရီးပို့်စ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘလက်ချောကြီး ကွန်းမန့်ပေးသွားသလို
အနုပညာ အားကောင်းရင် ဆက်စုပ်ရွံရှာစရာတွေတောင်
ဂျိုး စီးရီး ပို့စ်တွေက ပြောနေတယ်…
ကမ်းဝေး၏ အနုပညာက အားကောင်းလွန်းနေသည်မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။
လူဆိုး လူမိုက်ကြီးရဲ့ သမီးရေးတဲ့စာ….Her experiences – Kyeemite
ဦးကြီးမိုက် ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကလည်း ထူးခြားလို့ နေပြန်ပါသည်။
မကြာသေးခင်ကမှ ဆယ်တန်းကိုဘာသာစုံဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သော မေမြတ်နိုး ဆိုသည့်
ဦးကြီးမိုက် ၏ သမီးက သူမ၏ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်ရေးပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ တစ်ချိန်က ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါခဲ့ဖူးသော အားကျစေချင်လွန်းလို့ပါ ကဏ္ဍကို
မေမြတ်နိုးလေး ရေးပြထားသည်များကို ရွာထဲမှ ကျောင်းသားမိဘတချို့က ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ နမူနာယူထားကြသည်အထိ
မေမြတ်နိုး အနေဖြင့် ရွာထဲတွင် ကိုယ်ပိုင် ကလောင် ဖြင့် ဝင်ရောက်ရေးသားရန်လည်း
ဘွဲ့လွန်ပညာရေး (သို့) မြေကြွက်ကြီးရဲ့ ဆရာ့ဝဋ် – ဦးကျောက်ခဲ
စာမရေးတာ ကြာနေပြီဖြစ်သော ဦးကျောက်ခဲ ၏
ဘွဲ့လွန်ပညာရေး (သို့) မြေကြွက်ကြီးရဲ့ ဆရာ့ဝဋ် ပို့စ် အကြောင်းလည်း
ဘဝမျိုးစုံအောင် ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသည့် ဦးကျောက်ခဲ၏ လူသိနည်းလှသော ကျောင်းဆရာဘဝ အကြောင်း
ဦးကျောက်ခဲ ၏ ပေါ့ပါးသွက်လက် အရွှန်းဖက်သည့် ရေးဟန်ကြောင့် ဖတ်လို့ကောင်းသော
ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်းနှင့် အရွှတ်အနောက်တွေသာ မန့်လေ့ရှိသော
ကိုကြောင်ကြီး၏ အတည်ပေါက်ကွန်းမန့်ကိုပါ ဖတ်ကြရမည့်ပို့စ်ဖြစ်ပါကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါသည်။
မောင်ဆာမိ နှင့် ထင်ယောင်မိမှား ဖြစ်ရပ်များ – ဆာမိ
ကျွန်တော်က စာမရေးတတ်ပါ ဟု အစချီ ပြီး ရေးထားသော ကိုဆာမိ ၏ ပို့စ်ကိုဖတ်ရင်း
ကျွန်တော်တို့ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောမိကြပါသည်။
မနက်စောစော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်တက်နေသော အိမ်သာတံခါးကို ဆွဲဖွင့်မိလျက်သား ဖြစ်ခဲ့သော ကိုဆာမိ။
ဝါးလက်စကွမ်းယာကို နှမြောပြီး မထွေးမိသဖြင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဆွံ့အနားမကြားဟုထင်ပြီး
ဘဝကိုတော့အရှုံးမပေးဘူးနော် … ဒုက္ခိတပေမယ့် ကားမောင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားတာပဲ
ဟု အချီးကျူးခံရသော ကိုဆာမိ။
စသည်ဖြင့်…စီကာစဉ်ကာ ရေးသားထားသော ပို့စ်လေးသည် ကျွန်တော်တို့၏ လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေသော
စိတ်များကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေခဲ့ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောဖြစ်ကြပါသည်။
အရီးခင်လတ် ၏ Post of the day အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုပါ ခံခဲ့ရသောပို့စ်ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျား။
ညီလေး အလင်းဆက် နှင့် မြန်မာစာချစ်သူ ရွာသူ/ရွာသားများသို့ အပိုင်း (၂) – ရွှေညာသား
သူကြီး၏ စတစ်ကီ နှင့် Editor’s Choice ကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း ရရှိခဲ့သည့် ဒီပို့စ်ကလေးက
ကျွန်တော်တို့ အတွက် အမှတ်တရ များစွာ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
ရွှေညာသားဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကဗျာတွေစာတွေကို သွေးထဲကကို ချစ်သူ ဖြစ်ကြောင်း
သက်သေပြလိုက်သည့် ပို့စ် ဖြစ်သည်။
ကဗျာတွေ အကြောင်းကို အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က ညီငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောပြနေသလို
ထူးခြားသည်မှာ ရွှေညာသား ၏ ယခုပို့စ်ရေးဟန်မှာ ကိုသစ်မင်း ၏ လေသံ နှင့် ဆင်တူနေခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ထို့အတွက်လည်း ရွာသား ရွာသူ အချို့ကပင် ကိုသစ်မင်း အထင်နှင့် ဝင်ရောက်နှုတ်ဆက် သွားတာကိုပင်
ရွှေညာသားမှ ကိုသစ်မင်း မဟုတ်ပါကြောင်း ဖြေရှင်းခဲ့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ စာဂျပိုးများမှ ကိုသစ်မင်းထံ
ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်း အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်အထိ သံသယစိတ်တွေ ဝင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုသစ်မင်းကလည်း ရွှေညာသား သည် သူမဟုတ်ပါ ဟု အတည်ပြုပေးခဲပါသည်။
နည်မည်ခေါ်ရေးခြင်း ခံရသော အလင်းဆက်အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ကဗျာချစ်သူ စာချစ်သူတိုင်း ဖတ်သင့်သည့် ပို့စ်ကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါသည်။
ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်း – nicolus agral
သဂျီး နဲ့ ကဖုန်းကျော် စပ်ကျထားတာဟု ကျွေးကျော်လာသော Nicolus agral ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို
ကျွန်တော်တို့ တော်တော် ကြိုက်နေမိကြပါတယ်။
ဆရာဝန်မလုပ်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းပါ။
အကျဉ်းဆိုပေမယ့် ချဲ့ကြည့်ရင် ကျယ်ချင်သလောက် ကျယ်နိုင်တဲ့ အကျဉ်းမျိုးပါ။
သူကြီးနဲ့ ကိုဘုန်းကျော် တို့ရဲ့ အတွေးတွေအတိုင်း ရှိနေတဲ့
Nicolus agral ရဲ့ စိတ်ကို ဘွင်းဘွင်းကြီး မြင်လိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊
ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်လေးတွေကလည်း အများနဲ့ မတူ တဲ့ အကြောင်း၊
ပညာရေးအပေါ် အကြံပြုသွားတာလေးတွေလည်း ကောင်းပါကြောင်း၊
ကွန်းမန့်လေးတွေကလည်း ပို့စ်နဲ့ အတူ ဖတ်လို့ ကောင်းပါကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့သော ပလက်ဖေါင်းများ – ကိုပေါက် (မန္တလေး)
ကိုပေါက် ၏ အတ္ထုပတ္တိ လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပို့စ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ဖတ်ဖြစ်ကြပါသည်။
ယခု ပို့စ်ရေးနေချိန်အထိ အမှတ်၅ အထိရောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အဆုံးမသတ်သေးသဖြင့် ဇာတ်လမ်းတွဲဟု သုံးနှုန်း
ကျ နော် ဖြတ်သန်း ခဲ့ ရ တဲ့ နှစ် တစ် နှစ် ကို ပ လက် ဖောင်း စင်္ကြန် တစ် ခု လို့ တင် စား ချင် မိ ပါ တယ်။
ဟု ဆိုထားသဖြင့် တစ်နှစ်တာ ဖြတ်သန်းမှု ကို ပလက်ဖေါင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖတ်ရမည့်သဘောဟု ယူဆမိပါသည်။
တကယ်တမ်း ဖတ်ကြည့်တော့လည်း ပလက်ဖေါင်းတစ်ခုကို တစ်နှစ်နှုန်း ဖြင့် ရေးထားတာကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ပလက်ဖေါင်း အမှတ် ၁ မှာ ၁ဝ နှစ် အရွယ်အထိ၊
ပလက်ဖေါင်း အမှတ် ၂ မှာ ၁၁ နှစ်မှ ၁ရ နှစ်အရွယ်အထိ၊
ပလက်ဖေါင်း အမှတ် ၃ မှာ ၁၈ နှစ် တစ်နှစ်တည်း၊
ပလက်ဖေါင်း အမှတ် ၄ မှာ ပလက်ဖေါင်းနံပတ်မပါတော့ပါ၊ ၁၈ နှစ်ကိုပဲ ဆက်ရေးတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်၊
ပလက်ဖေါင်း အမှတ် ၅ မှာ ၁၉ နှစ် တစ်နှစ်တည်း။
ကိုပေါက်က သူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ခေတ်စံနစ် တွေထဲက ဗဟုသုတ ဖြစ်စရာ သမိုင်းအချက်အလက်တွေနဲ့အတူ
ဖတ်သူအတွက် ရသ တစ်ခုပေးဖို့ အထိရည်ရွယ်ဟန်တူပါတယ်။
“မာမီ “ဆီ အသွား ဒီ တော လမ်း ကလေး မှာ ဆော့ က စား ရင်း သွား ရ တဲ့ အ ခါ
တော ပန်း လေး တွေ ကို ခူး ပြီး “မွှေးလား မာ မီ “ လို့ ကျ နော် က မေး ရင် ပြုံးပြီးေ ခါင်းလေးငြိမ့် ပြ တဲ့ အခါ
အ လေ့ ကျ ပေါက် နေတဲ့ တောကြက်ဟင်းခါး သီး လေး တွေ ခူး ပြီး “မာမီ “ ကို ပေး တဲ့ အခါ
Thank you my boy လို့ ပြော ရင်း ကျ နော် ခေါင်းလေး ကို ငြင်သာ စွာ ပွတ် ပေး တဲ့ အခါ
နှင်း တွေ ဝေ တဲ့ ဆောင်းမ နက် များ မှာ နှင်းထု တွေ ကြား ထဲ ဖြတ် သွားရ တဲ့အခါ
မိုး ဖွဲ ဖွဲ ရွာ နေ ချိ န် မှာ လွယ် အိတ် ကို စလွယ် သိုင်း ပြီး ဒုန်း စိုင်း ပြေး တဲ့ အခါ
မိုး အခါ မှာ ရေ စီး သန် တဲ့ ချောင်း လေး ထဲ ကို စက္ကူ လှေ က လေး တွေ လွှတ် တဲ့ အခါ
“မာမီ “ အိမ် အ နောက် ဘက် ဇီး ပင် လေး က အသီး တွေ သီး ချိန် ဇီး သီး တွေခူး ကြတဲ့ အခါ
နွေ ည နေ ခင်း လေး မှာ လမ်း လျောက် ရင်း “မာမီ” ပြော ပြ တဲ့ ပုံ ပြင် လေး တွေ ကို နားထောင်ရ တဲ့ အခါ
အဲဒီ “အခါ “ ပေါင်း များ စွာ က ကျ နော် အတွက် မ မေ့ နိုင် စရာ အခါ တွေ ပါဘဲ
ဆိုတဲ့ အရေးအသားမျိုးတွေ နဲ့ မွမ်းမံခြယ်သထားတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးရာဇဝင် ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မန်းဂဇက်အတွက်တော့ လမ်းသစ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ပလက်ဖေါင်းများကို
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အသိအမှတ်ပြု ကြိုဆိုပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ခင်ဗျာ။
လူတန်းစေ့အလုပ်ခွင် – Etone
Etone ရဲ့ လူတန်းစေ့အလုပ်ခွင်ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးအကြောင်းလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
စူပါမားကက် တစ်ခုက အရောင်းဝန်ထမ်း ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဘဝကို အခြေပြုပြီး
တွေးမိတဲ့အတွေးတွေကို ချရေးထားတဲ့ ပို့စ်ပါ။
အကာအကွယ်မဲ့ ဖြစ်နေရရှာသော အလုပ်သမားများ၏ အခြေအနေ၊
သမာသမတ်မရှိသော အလုပ်ရှင်တချို့၏ တာဝန်မဲ့မှု၊
အလုပ်ရှင်ကိုရော အလုပ်သမားကိုပါ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်မှု
စသည်ဖြင့် မီးမောင်းထိုး ရေးပြထားပြီး လူတန်းစေ့ အလုပ်လုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းခွင်ကို
အလိုရှိပါကြောင်း ပြောရင်း ပို့စ်ကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
ကိုဆာမိ၊ ကိုပါလေရာ၊ ကိုကြီးမိုက်၊ ကိုပေါက်၊ သူကြီးတို့ရဲ့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုကလည်း
ပို့စ်ကို မြိုင်ဆိုင်စေခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
လူတန်းစေ့ အလုပ်လုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းခွင်တွေ များများ ပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ ကျွန်တော်တို့
ဝင် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ပုလင်းနက် နှစ်လုံး – မောင်ဘလှိုင်
H.P Lovecraft ရဲ့Two Black Bottles ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့
မောင်ဘလှိုင်ရဲ့ ပုလင်းနက်နှစ်လုံး ပို့စ်ကတော့ ဘာသာပြန်စာပေပရိသတ်အတွက် သင့်တော်မည့်
တစ္ဆေ ဝတ္ထု တို တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲတင်ထားသည့် ပို့စ်ဖြစ်ပါသည်။
ဟော့ဖ်မန်း ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးက စာဖတ်သူကို ပြောပြနေတဲ့ ပုံနဲ့ ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုပါ။
ဒယ်ဘာဂျန် ရွာလေးမှာရှိနေတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို အေဘယ်ဖေါ်စတာ ဆိုတဲ့
အဘိုးကြီး ရောက်လာရာက ဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာပြန် ဝတ္ထုတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စဖတ်ကာစမှာ နာမည်တွေက ထောင့်တောင့်တောင့်
ဖြစ်နေပေမယ့် နည်းနည်း အားစိုက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ဝတ္ထုရဲ့ စွဲဆောင်မှုကို ခံစားကြရပါတယ်။
ဘာသာပြန်စာပေ နည်းပါးလှတဲ့ မန်းဂဇက်အတွက်လည်း မောင်ဘလှိုင်ရဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာတွေ
လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
မောင့်ဗစ်တိုးရီးယား – pooch
အင်မတန်လှပ ပြည့်စုံသော တောင်တက်မှတ်တမ်းတစ်ပုဒ် လို့ ကျွန်တော်တို့ တင်စားချင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ မမြင်ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းအသစ်အဆန်းတွေမို့ စွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အတူသွားခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အပြင် အဲဒီဒေသက ချင်းလူမျိုးတွေ ရဲ့ ဓလေ့စရိုက် တွေနဲ့
သူမ ရဲ့ အမြင်ကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့ ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုသစ်မင်းရဲ့ ကွန်းမန့်လေးက အားဖြည့်လိုက်တော့
အင်မတန်လှပ ပြည့်စုံသော လို့ ဝိသေသန ပြုလို့ ရခဲ့ပါကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ စာဂျပိုးများမှ မှတ်ချက်ပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗျူ ဟာ နဲ့ ပဂိုးဝန်ထောက် – မင်းခန့်ကျော်
မင်းခန့်ကျော် ရဲ့ ပို့စ်လေးကလည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက် ပြောစရာတွေ များခဲ့ပါတယ်။
ဗျူဟာက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ ပဂိုးဝန်ထောက် က ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။
မက်ဆေ့ချ် လေး နှစ်ခု အတွက် ဇာတ်လမ်းလေး နှစ်ပုဒ်ပါ။
ဗျူဟာ ကိုတော့ ကိုမင်းခန့်ကျော်က သူ့ သားလေး နှစ်ယောက် ကြက်တောင်ရိုက် တာကနေ
သားငယ်သုံးလိုက်တဲ့ ဗျူဟာ ကို ပြန်ရေးပြထားတာပါ။
မိမိအနေအထားကိုရန်သူအထင်သေးနေပါေစ ဆိုတဲ့ ဗျူဟာ လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့မှ ပဂိုးဝန်ထောက် ဇာတ်လမ်းပေါ့။
ဒီဇာတ်လမ်းကိုလည်း ကိုမင်းခန့်ကျော်က သူ့ဇနီးနဲ့ အိမ်မှာကြုံရတာလေးကို ရေးထားတာပါ။
အင်းးလင်မယားဆိုတာ အပြန်အလှန် သူသိက္ခာမကျအောင်ကိုယ်အရှက်မရအောင်
အပြင်ထွက်ခါနီး အဝတ်အစားတွေကို တလှည့်စီဝေဖန်ပေးမှ ။ အများတစိမ်းကဝေဖန်လာပြီဆိုရင်
ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ဒဲ့ပဲ ပေးသွားပါတယ်။
ဗျူဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုပါလေရာ ပေးသွားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ကျွန်တော်တို့ အတော်သဘောကျနေမိကြပါတယ်။
ကိုယ့်ကို အရှိထက် တော်တော်အထင်သေးဖို့က
ရန်သူကလဲ ညံ့ ရမယ်၊ ညံ့ဖို့ လိုမယ်ဗျ..။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို စွန့်ခွာကြသူများ (ညီမလေးဖတ်ဖို့) – htet way
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေသည့် သတင်းသမား ဆရာထက်ဝေး ၏ အကျိုးပြုပို့စ်လေးဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်း နီးပါး အသုံးပြုလျက်ရှိနေပြီဖြစ်သော Facebook အတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ကိစ္စလေးများကို
ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ပြောပြနေဟန်ဖြင့် ဆရာထက်ဝေးက တင်ပြရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းစာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။
ဘာပဲပြောပြော Facebook ကို စတင်သုံးစွဲတော့မည့် ညီငယ် ညီမငယ်များ အတွက် ဆရာထက်ဝေး ၏
စေတနာကို ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။
အရီးလတ် ၏ ကွန်းမန့်လေး ကိုပါ ဖတ်မှ ပြည့်စုံမည့်အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါသည်။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် – (weiwei)
Weiwei ရဲ့ ခရီးသွားပို့စ်လေး ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွင်း ရွှေတြိဂံဒေသကို သွားခဲ့တဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးပါ။
အပိုင်းရှစ်ပိုင်း ရှိပြီး တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာ နဲ့ ခရီးစဉ်အကြောင်း ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အပိုင်း (၈) ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ အပိုင်း (၁) ကနေ အပိုင်း (၇) အထိလင့်တွေကို အလွယ်တကူ ဖွင့်ဖတ်နိုင်အောင်
ခရီးစဉ်တောက်လျှောက် စားသောက်သွားလာတာလေးတွေကို ပြောပြ၊ တည်းခိုရာနေရာက အစ မျှဝေ၊
ဒေသခံတွေ ရဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း နဲ့ ရောက်ရှိရာမြို့မှာရှိတဲ့ ဘုရားတွေ ရှုခင်းတွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ
အတော် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြထားတာမို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် တန်ဘိုးရှိလှပါတယ်။
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၅ ) ( အနှိမ်ခံ တဲ့လား ) – Foreign Resident
Foreign Resident စဉ်းစားစေချင်တဲ့ ကိစ္စ ရပ်တွေဟာ တကယ်ကို စဉ်းစားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရယ်လို့
မြန်မာပြည်မှာက ၊ မြန်မာပြည်ပေါက် အချင်းချင်းတောင်မှ ၊
တရုတ် ကုလား ဘင်္ဂါလီ စသဖြင့် ၊ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတတ်တဲ့ စရိုက်ဆိုးကြီး စွဲနေတာကြောင့် ၊
( ကိုယ့်စိတ်နှင့် နှိုင်းတော့ ရိုင်း ဆိုသလိုပေါ့ ) ဒီဖက်က ဒီမိုအစစ် နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း ၊
အဲဒီလိုဘဲ တရားလက်လွတ် uncivilized ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ တထစ်ချ ယူဆနေကြတယ် ။
အခု Post ကတော့ အဲဒီ အကြောင်းကို နဲနဲ ရှင်းပြချင်တာပါ ။
FR ကသူနေထိုင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစစ် နိုင်ငံကြီးမှာ
(တရားဝင် လာရောက်နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား / အာရှသားတွေကိုရော) ကို
အစိုးရက ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကို ထိထိမိမိ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့အကြောင်း သေချာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရော ဧည့်နိုင်ငံသားတွေကို အစိုးရက ဘာဖြစ်လို့ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြီး
အကာအကွယ်ပေးမထားတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲကို
တခြား ဖတ်ကြည့်စေချင်သော ပို့စ်လေးများ –
၁။ ပီအာ (PR) ဆိုသည်မှာ – Kogyi mind
၂။ ဗာဂျီးနီးယား၊ ဟားဗတ် နဲ့ ဂဇက် ရွာ Research (ရှော့ရိုက်ကြသူများ – Result) – အရီးခင်
၃။ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်က ဉာဏ်ကြီးရှင် – ကြောင်ဝတုတ်
၄။ အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁ ( Introduction ) – Foreign Resident
၅။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု – Teashop ရိုးရာ – စီစီခင်ဇော်
၆။ အဘဖေါ ရဲ့ နယူးဇီလန်သွား Cruise တောလား – ၁ရ ( Return Home ) – Foreign Resident
၇။ စာ နယ် ဇင်း လွတ် လပ် ခွင့် ဆို တာ ဒါ လောက် ဘဲ အသုံး ချဘို့ လား – ကိုပေါက် (မန္တလေး)
ဖတ်ချင်တဲ့ ပို့(စ) တွေကို ဒီ မှာ ဖတ်နိုင်ပါကြောင်းးး
ယနေ့ပို့(စ) – ဂျူလိုင် ၂၀၁၄
မဝေ ပို့(စ) တွေ ကြိုက်ကို ကြိုက်လို့ ဂလိုပဲ ညွှန်းလိုက်မယ်။
ကျနော်တို့ မဝေနဲ့ တူတူ ရွှေတြိဂံ နယ်မြေကို လိုက်ပါသွားကြဦးစို့ဗျ နော့။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၁)
သင်္ကြန်ပိတ်ရက် သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်ပါ ခင်ဗျာ။ ပထမဆုံး တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကိုရောက်တာက စ၊ တာချိလိတ်ဘက် ခရီးဆန့်ခဲ့တာလေးကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တကွ ဝေဝေ စာစာ တင်ပြထားတဲ့ အပိုင်း (၁) ပါ။ ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းကနေ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ခရီးစဉ်တောက်လျှောက် စားသောက်သွားလာတာလေးတွေကို ပြောပြ၊ တည်းခိုရာနေရာက အစ မျှဝေ၊ ခရီးသွား ခံစားချက်လေးပါ ပါတာမို့ စတင်လိုက်ပါလာသူတွေ အတွက် စိတ်သက်တောင့်သက်သာ ဖတ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းလေးလို့ ညွန်းချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၂)
ဒီ အပိုင်း (၂) မှာတော့ ကုန်ဟိန်းကနေ ကျိုင်းတုံထိ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ သွားရင်းလာရင်း မြင်တာလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ရင်း ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ပြောပြသွားတာမို့ ကျိုင်းတုံရောက်တဲ့ထိ ကိုယ်ပါ တပါတည်းလိုက်ပါသွားသလို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အပိုင်းမှာတော့ စာရေးသူရဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ အယူ အဆလေးတွေပါ မြင်တွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၃)
ကျိုင်းတုံ-တာချီလိတ် ခရီးကို အပိုင်း (၃) မှာ ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူနဲ့ တူတူ ကျိုင်းတုံမှာဘုရားဖူးနိုင်မှာဖြစ်သလို ကျိုင်းတုံ ကနေစတင်ထွက်ခါတဲ့ အခြေအနေလေးတွေကို ငေးရင် တာချီလိတ်ထိ လိုက်ပါလာသလို ခံစားရအောင် တင်ပြသွားတာပါဗျာ။ တာချီလိတ်ကနေ မယ်ဆိုင်ဘက် ကူးတဲ့ အထိ အရောက်ပို့ခဲ့တဲ့ ပို့(စ) လေးပါ။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၄)
မယ်ဆိုင်ဘက် ရောက်တဲ့ အခါ အလောင်းမင်းတရားတည်ခဲ့တဲ့ ဘုရားး၊ နှီးဘုရား စတဲ့ ဘုရားဖူးသွားရာ တောက်လျှောက် ဓာတ်ပုံတွေ ပြောပြသွားတဲ့ ပို့(စ) ပါခင်ဗျာ။
ယိုးဒယား လက်မှု အနုပညာ လေးတွေပါ မြင်နိုင်တာမို့ ဒီ အပိုင်းကလည်း လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အပိုင်းပါ။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၅)
မယ်ဆိုင်မှာ ညအိပ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှ ချင်းရိုင်ဘက်သွားတဲ့ ပို့(စ) ပါ။ ရွှေတြိဂံ နေရာက ဓာတ်ပုံတွေကို ဒီ ပို့(စ) မှာ စတင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ စက်လှေနဲ့ မဲခေါင်မြစ်ကနေ ရွှေတြိဂံနေရာကို သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်ဘက်က ယိုးဒယား၊ ညာဘက်က လောနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်က မြန်မာနိုင်ငံပါ။ ၃ နိုင်ငံရဲ့ အလယ် ဒေသမှာ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက အစ ဈေးတန်း အဆုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြထားတဲ့ ပို့(စ) လေးပါ။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၆)
ချင်းရိုင်က နံမည်ကြီး ဘုရားဖြူ အတွက် သီးသန့်ပို့(စ) ပါ။ အနုစိတ်လက်ရာများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး အနုစိတ်ရိုက်ကူးထားတာမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၇)
ဒီပို့(စ) မှာတော့ မူလ မြဘုရားနဲ့ ကိုးထပ်ဘုံကျောင်းကို သွားရမှာပါ။ မူလ မြဘုရား ဝင်း အတွင်း ကိုယ်တိုင်သွားရသလို မြင်ရမဲ့ နေရာလေးတွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာပြောပြထားတာမို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပို့(စ) ပါ။
ထူးထူးခြားခြား နတ်ကွန်းနဲ့ ကိုးကွယ်ထားတဲ့ မြန်မာဘုရင်ကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မန့်လေးတွေတွဲဖတ်ရင် ပိုပြည့်စုံပါတယ်။
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၈)
ခရီးအစီအစဉ်ပြောင်းပြီး တရုတ်နယ်စပ်က မိုင်းလားမြို့ထိအရောက်ပို့ခဲ့တဲ့ ပို့(စ) ပါ။
အပြန်လမ်းအတိုင်း ကျိုင်းတုံထိသွားပြီးမှ အဲဒီက တဆင့်မိုင်းလားအထိသွားခဲ့တာပါ။
မြို့ရဲ့ လူနေမှု အဆင်အတန်း၊ ရှုခင်း၊ အစားအသောက် စတာတွေကို ဓာတ်ပုံနဲ့ ဝေဝေဆာဆာပြောပြထားတာမို့ ရွှေတြိဂံ ခရီးစဉ်ရဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက် အပိုဆုရတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ လေးလို့ ပြောချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
သများလည်း ညွှန်းတတ်ပါတယ် ဆို။
သများကိုလည်း ဂျဘိုးမှာ ခေါ်ဂျဘာ။
သများ ကိုက်လည်း ကိုက်တတ်တာ ဂျဘိုးထက်သာပါတယ်။ အဟိ။
ပို့စ်ကို သေချာဖတ်ထားပြီး အကုန်မှတ်မိနေတာမို့လို့ ဂုဏ်ထူးမှတ်ပေးပါတယ် ဇီဇီ …
ဇူလိုင်လထဲမှာတော့ ကိုကမ်းဝေးရဲ့ ဂျိုးစီးရီးတွေကို သဘောကျမိတယ် ..
စီးရီးဆိုတော့ နောက်ထပ်လဲ မျှော်နေမိတယ် ..
ကိုပေါက်ကြီးရဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေကလဲ စိတ်ဝင်စားလို့ စောင့်ဖတ်ဖြစ်တယ် ..
ဇီဇီတို့တင်တဲ့ပို့စ်တွေကတော့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအပြည့်ပါလို့ မလွတ်တမ်း အားပေးဖြစ်တယ် ..
အခုတလော ပို့စ်တွေ သိပ်မများလို့ အားလုံးစုံအောင် ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ် …
စာ ကြမ်းပိုး says:
မဝေ ရွာ ကို ပုံမှန်ဝင်တယ် ဆိုတာ ကော်မန့်တွေ က သက်သေပါဗျာ။
စာဖတ်တဲ့သူ များရင် ညွှန်းရတာ အားရှိပါတယ်။
ကျ နော် ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး စာပိုဒ်လေး ကို ဖော် ပြ တဲ့ အတွက်ကျေး ဇူး ပါ
ဖြေး ဖြေး နဲ့ အချိန် ယူ ရေး ပါ မယ်
သမိုင်းလို့ မဆို နိုင်ပေမယ့်
ကျနော် လက် လမ်း မှီသလော က် ထိ တွေ့ သလောက် ကို ဘဲ ရေး ထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။.
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးလွန် ခဲ့ တဲ့ အကြောင်းကို ဘယ်စာ အုပ်မှ ပြန်မ လှန်ဘဲ ရေး တဲ့ အတွက်
အမှတ်မှားပြီး ပြော တာ များ ပါ ခဲ့ ရင် ထောက်ပြ စေလိုပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ပလက်ဖောင်းလေးများပေါ် လျှောက်လှမ်းတာကိုလည်း စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုရန် အသင့်ဖြစ်ပါကြောင်းး
လာ အားပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုပေါက် ရေ။
ဒီရွာထဲမှ အဲလိုစာကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရလို့ ဒီရွာကို ခင်တွယ်နေမိတာပါ။
ပြီးတော့ သူများတွေရဲ့ အရေးကောင်း စာတွေဖတ်ပြီး လက်တည့်စမ်းကာ
မတတ်တခေါက် တောင်ရေးမြောက်ရေး ရေးခွင့်လည်းရနေပြန်တော့
ဒီရွာမှ မောင်ကြီးမပြန်နိုင်ပေါ့ ဆိုသလို ရွာထဲရောက်နေတော့ တာပါဘဲဗျာ။
စာ ကြမ်းပိုရဲ့ သုံးသပ်တင်ပြမှုလေး ကြိုက်လှတယ်ဗျို့။
ကြိုက် နှစ်သက်သံ ကြားရင်ကို ကျနော်တို့ အားထုတ်ရကြိုး နပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အမှန်တော့ အင်တာနက် မသုံးတာကြာတော့ ပိုစ့်ကောင်းတွေ လက်လွတ်ခဲ့မိတာ စိတ်ထဲတောင်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ နောက်ပိုင်းအလုပ်က နေရာလေး တစ်နေရာ ရဖို့အတွက် ဝမ်းစာအတွက် အာရုံစိုက်နေတော့လည်း ရွာထဲမရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပါလားလို့ ခံစားမိပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စာကောင်းပေမွန်တွေ အများအပြား ဖတ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေကို အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ဖတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားတော့မယ်။
ကျနော် တို့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း စာကောင်းလေးတွေ ဖော်ထုတ်ပြီး
မဖတ်ရသေးသူတွေ အညွှန်းလေးနဲ့တင် ဖတ်ချင်လာအောင် ကြိုးစားထားတာပါ ခင်ဗျာ။
စာကြမ်းပိုးအဖွဲ့ ရဲ့ အချိန်ပေးပြီး စာပေဖတ်နိုင်မှု ကို ချီးကျူးပါတယ်…
စာရေးသွက်ပြီးထက်မျက်သူတွေ ဦးဆောင်နေတယ်လို့ အတိအကျကို ယုံကြည်ပါတယ်
ဒီလပို့စ်တွေ တော်တော်များပြီး ကောင်းတာတွေလည်းများသမို့ ဖတ်ရွေးရခက်ပါဂျောင်းးးး
ဖတ်ရွေးကတော့ ဆု အတွက် ရွေးရတာဖြစ်တာမို့ ပိုတာဝန်ကြီးတယ် ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် ကိုကြီးမိုက်ရေ။
ငါပြောတော့ အသူ မှ ယုံကြဝူးးးးးးးးးးးးးးးး
ညီလေးအလင်းဆက်နှင့်မြန်မာစာချစ်သူ ရွာသူ/ရွာသားများသို့ အပိုင်း(၃)
နင်တို့ စာကြမ်းပိုးတွေ တတ်မလာသေးလို့
တတ်လာမှ တောက်ချပစ်မယ် ( Credit : ဇီဇီ )
အဟဲ စတာ ..
အလင်းဆက်လေးရော ကဗျာရေးသံကို မကြားရပါ့လား
ငါနော် …………… ငါ့ညီ ရေ ……ကဗျာ မရေးလို့ကတော့
ညီလေး အလင်းဆက် သို့ ကို … ဆက်မရေးပဲ
ဟဲ ဟဲ စောင့်ကြည့် ငါ့ညီ တကယ်ပြောတာ
ဆရာသစ်ရဲ့ စာတွေလည်း အရေးအသားတူတယ်ဆိုလို့ ရှာဖတ်နေကြာင်းနှင့်
ရွာကိုးနတ်ရှင်မှ ဘာမှလုပ်လို့မရနိုင်အောင် ပြုစားနေကြောင်း
ဘာကိတ်စန ဂျဘိုးတွေကို စောင့်ရတာတုန်းးး
အပိုင်း (၃) ကို အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင် ကိုက်မယ်။
ကဗျာတွေ ရေးထားပါတယ်.. ။
လေးငါးပုဒ်တောင်… ရှက်ဂျူးနဲ ့..တင်ထားပါပြီ.. ။ အချိန်မကျသေးလို ့.. ပြင်ဆင်စရာလေး..ရှိသေးလို ့…
ဟိုမှာ… စာကြမ်းပိုးတို ့မှတ်ချက်လေး…
နာမည်ခေါ်ရေးခြင်း ခံရသော အလင်းဆက်အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။..တဲ ့.. ။
ကိုရွှေညာသားရဲ ့… မြန်မာစာချစ်သူများသို ့…တစ်ပုဒ် တက်လာတိုင်း..( ဖတ်မိတိုင်း )
ကျနော် ချရေးဖြစ်တဲ့.. မြန်မာစာ / ကဗျာ အကြောင်းတွေလည်း.. ရှိနေပါကြောင်း… ။
စိတ်ထဲ.. ဘဝင်မကျစရာလေးတွေ.. ရှိနေတုန်းမို ့…
စာကြမ်းပိုး ကို စောင့်ပြီး တင်မဲ့ ကိုရွှေညာသား ခင်ဗျားး
ဂဇက်သည် ဤမည်သော စာတို့ဖြင့် ဝင့်ကြွားနိုင်ပါ၏။
ဂေဇက်သည် ဤမည်သော အတွေးအခေါ်တို့ဖြင့် တန်းမြင့်လှပေ၏။
ဂေဇက်သည် ဤမည်သော သူတို့ဖြင့်ဂုဏ်တင့်လှပေ၏။
ဟူ၍…….သင်တို့ မီးမောင်းကြိုးစားမှုကို ဩဘာပြုပါသည်။
အချိန်လဲပေး စေတနာလဲပါ မေတ္တာလဲထားနိုင်စွမ်းရှိလှသော
ဂေဇက်ရဲ့..ဝါသနာရှင် ပညာရှင် စာရေးသူများရဲ့နှလုံးသားကို
နှလုံးသား အဟာရ ဒါန ပြုသူများပါလို့ ဆိုပါရစေ..။
ဂဇက်ရွာကို..ဒီနှစ်ထဲ.. ဂီယာထိုးတဆင့်မြှင့်မလို့.. လှည့်ပတ်ကြံနေတာ…
အဲလိုကြံကြီးစီရာတွေလုပ်မယ်ဆိုတိုင်း.. ဆရာသစ်ကိုတော့.. အထူးသတိရပါတယ်..
ဆရာသစ်စာတွေပြန်ဖတ်ချင်သူတွေအတွက်.. နတ်လမ်းညွှန်ကာ.. ညွှန်းလိုက်ကြောင်း..
ကိုခိုင် ကျနော် 2012 က စာ တစ်ချို့ပျောက်နေ လို့ ပြန်စု ပေး စေချင်ပါတယ် လို့ အကူအ ညီတောင်းပါတယ်
နှလုံးသား အဟာရ ဒါန ပြုသူများပါ
ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ ့တင်… တော်တော် ကျေနပ်သွားမိတယ် ။
ဂုဏ်ယူစရာ….တို ့ရွာပါ… ။
ဂျဘိုး တွေ မကြားပါစေနဲ့။
ဟို ဂျဘိုးဂျီး အဆိုးဆုံးနေမှာပဲ၊ ဟိဟိ။
ကိုသစ်မင်းရဲ့ ဒီ ကော်မန့်လေးဟာလည်း
စာကြမ်းပိုးတို့အတွက် စိတ် အာဟာရ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
လတိုင်း မျှော်နေမိတဲ့ပို့စ်ပါ စာကြမ်းပိုးတို့ရေ…
မဖတ်ရသေးတဲ့စာတွေ အများကြီးမို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကြောင်း..
လတိုင်း မျှော်ရကျိုး နပ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ခင်ဗျ။
ဒေါမပွနဲ ့တော့.. ချစ်သော… ဦးကြီး.. ဟိုမှာ..ရောက်နေပြီ.. ။
အစကတည်းက… အညွှန်းလေး..ရေးထားတာပါ.. ။
တစ်နေရာက တစ်နေရာကို… အကူးမှာ … ကျန်ခဲ့ပြီး..
အခုမှ ပြန်စစ်လိုက်နိုင်လို ့…. ပါ… တဲ ့….
အပုဒ်တိုင်းမဖတ်ရပေမဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့ ဆရာ စာကြမ်ပိုးအပြောနဲ့တင် ဆရာကြီးတွေ အားလုံးရဲ့
အနုပညာနဲ့ စေတနာသက်ဝင်ခံစားမှုကို လေးစားလှပါပြီ။ ရသစာပေ နှစ်သက်လို့
ခုညွှန်းမှရသစာပေတွေနည်းနေလို့များလား ရေးသူနည်းလို့များလား.. ရသစာပေခေတ်ကုန်သွားပီလားတောင် ဇဝေဇဝါဖြစ်မိလျက်… အားပေးလျက်
လုပ်ပါဦးဗျ တစ်ပုဒ်လောက် ။
ရသက ခေတ်မကုန်ပါဘူးဗျာ … ကိုရင်တို့ပြန်ရေးကြပေါ့ နော
ရသစာပေ အခန်းကဏ္ဍ က အရင် ထက် စာရင် မှေးမှိန်သွားတာအမှန်ပါဘဲ
ကိုရင် စည်သူ ခင်ဗျားးး
ရသပိုင်း အတွက် ရေးနိုင်သူများ လိုအပ်တာ အမှန်တာမို့ ပြန်လည် လာရောက် အားဖြည့်စေချင်ပါတယ်။
အသိ အမှတ် ပြုမှု အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
တကယ့် လ ပါပဲဗျို့ ….
တကယ့် ပို့စ်တွေ ကွန်မန့်တွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ် ….။
အဲ … ဒီလ ဆိုပေမယ့် …
ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေကလည်း အတူတူပါပဲနော့ ….
ယနေ့ ပို့(စ) အတွက်လည်း ကိုအံစာ ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလို ပါတယ်။
မကျေနပ်ဘူး… လုံးဝမကျေနပ်ဘူး… (ခိုင်ထူးသီချင်းမဟုတ်ပါ)
ဘယ့်နဲ့ဗျာ… ကျောက်စ်ကို မန့်ထားတာလေး အရသာခံပြီးဖတ်နေတုန်းရှိသေးတယ်…
သေသေချာချာကောင်းချီးဩဘာပေးမလို့ Log-in လုပ်လိုက်တော့ အဆင့်လျော့သွားပြီ…
တော်ဘီ ဘုရားဒကာရန်တိုက်လုပ်တဲ့ စာဂျပိုးဂျီးတွေကို မမန့်တော့ဘူး…
လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တွေဖြည့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောမလို့ ဟာကို… တောက်စ်
နောက်လည်း ဝင်ပါ ဖတ်ပါ မန့်ပါ ခင်ဗျာ။
ရွာနဲ ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်နေလို ့
ဒီ တစ်ခေါက် က ယနေ့ ပို့(စ) အရင် တက်တာမို့ အဲဒီ လင့်(ခ) ကိုပဲ ပေးလိုက်တာပါ။
ဖတ်ချင်တာကို အဲဒီက လွယ်လွယ်ဖတ်နိုင်ပါတယ် ဗျာ။
တူညားတွေ ကွန်ပလိမ်းတက်လို့ နာလည်း တက်အူးမှ။
တညား နာမယ် ဇီဇီ ခင်ဇော် ပါချင့်။
စီစီခင်ဇော် ဆိုတာ တညား အချစ်တော် ကရင်မလေးက ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ နာမည်ပါချင့်!!
ဇီဇီ ခင်ဇော် ဆိုတာ ဒက် ပေးထားတဲ့ နာမည်မို့ ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူးး
ဟတ်ကဲ့!! အကြမ်းပညာ အလုပ်တွေကိုလည်း ဒီ နာမည်နဲ့ပဲ လုပ်သွားမှာပါချင့်။ အဟင့်!!
ကျနော်တို့ကတော့ စီစီ ခင်ဇော်လို့ပဲ ခေါ်ချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ။
ရွာထဲမှာ နောက်ထပ် ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ မကြာခင်မှာ ဖြစ်လာတော့မှာကို ကြိုမြင်နေမိတယ်ဗျို့
ရင်ခုန်သံတွေကို ညွှန်းသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း ဦးမာဃရေ။
မဝေရဲ့ ရွှေတြိဂံ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေနဲ့
ကိုပေါက်ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့သောပလက်ဖေါင်းများ ခေါ် ဘဝခရီးသွားဆောင်းပါးတွေကတော့
တကြိမ်ထဲဖတ်လို့ မပြီးနိုင်တဲ့ ပိုစ့်တွေပါပဲ…
ပြောလို့ ဆိုလို့ ဆွေးနွေးလို့လဲ ကောင်းတဲ့ပိုစ့်တွေပါပဲ..
ခက်တာက ကွန်မကောင်းတဲ့ လ မှာမှ ဖတ်ရသကိုး…
ပို့(စ) တိုင်းမှာ ဦးပါလေရာ ရဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုလည်း
မလွတ်တမ်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာ အသိပေးလိုပါတယ်။
မောင်ကမ်း ကဗျာ ဆရာ ရဲ့ “နှပ်ချေး” ကို လွတ် နေခဲ့ကြောင်းသိရ၍ ပြန်ဖတ်ပါမည်။
စာ အပြင်အဆင် ကို ကြည့်ရတာ မဟုတ်မှလွဲ ရော ….
ဟင်း .. ဟင်း .. ဟင်း
မြစာကလေး @ အရီးခင်
လွတ်သွားတဲ့ ပို့(စ) လေးတွေကို ပြန်ဖတ်နိုင်တယ် သိရတော့ ညွှန်းရတာ အားရှိပါ့ခင်ဗျာ။
စာဂျဘိုးအဖွဲ့ကြီးကို တစ်ခုလောက် ချောက်ချ အဲ အဲ မှားလို့
အခုတလော သတင်းစာမျက်နှာဖုံးတွေ အွန်လိုင်းသတင်းတွေမှာလူပြောသူပြောများနေတဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းလေးဘာလေး ဆွေနွေးကြပါလားခင်ဗျ ။
တချို့ကလည်း ဆယ်လို့ရမယ် မရဘူး တစ်ချို့ကလည်း ရှိတယ် တစ်ချို့ကလည်း မရှိဘူး စသည်ဖြင့် ပြောနေကြလို့ပါ ။
ဒေါက်တာ ချစ်စံဝင်းကတော့ ဒီလိုလုပ်ပုံနဲ့တော့ ဆယ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေပြီဗျ ……
အဲဒီအကြောင်းအရာကို ရွာထဲမှာဆွေးနွေးကြရင်ဖြင့် ဒုတိယရွာတွင်းစစ်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်သလို အပြန်အလှန်အော်ဟစ်ကြရင်းနဲ့လည်း ရွာပျက်သွားကောင်း ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်
တစ်ခု သတိထားမိတာက ဒွန်ကင်းခိုင်တစ်ယောက် ဒီကိစ္စမှာငြိမ်နေပုံထောက်ရင် သူလည်း ခေါင်းလောင်းကြီးကိုမထိရဲဘူးထင်ပါတယ် ဟဲ ဟဲ .……
ကဲ ဗျာ စာဂျဘိုးအဖွဲ့က သွေးရဲကြောင်း ပြလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ
ကျုပ်ကတော့ယုံလို့.. တောင်ပြုန်းက.. အရက်သမားနတ်ကို.. အကူအညီတောင်းထားတယ်..။
ဆွပေး ဆွေးနွေးဖို့ ကြောက်နေတယ် ဟုတ်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ဝ ကျော်လောက်က ပါဒ နိုင်ငံအကြောင်း တူးကြပါလား ငင်
နာ့ ယောက်ခမွ အရမ်းအားနေပြီ။